20 000 kilao ny tsipika famokarana zezika - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny tsipika famokarana isan-taona misy zezika 20 000 taonina dia fitambarana fitaovana mandroso. Ny vidin'ny famokarana ambany sy ny fahombiazan'ny famokarana avo. Ny tsipika famokarana zezika marobe dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana akora samihafa mifangaro. Ary farany, ny zezika mitambatra misy fifantohana sy raikipohy samihafa dia azo omanina arakaraka ny tena filàna, mameno tsara ireo otrikaina ilain'ny voly, ary mamaha ny fifanoherana misy eo amin'ny fangatahana sy ny famatsian-tany.
Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia afaka mamokatra zezika mitambatra avo sy salantsalany ary ambany ho an'ny voly isan-karazany. Ny tsipika famokarana dia tsy mila maina, miaraka amin'ny fampiasam-bola kely sy ny fanjifana angovo ambany.
Ny roller ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia azo natao hamolavolana endrika sy habe samihafa mba hanery sy hamokarana sombin-javatra samy hafa habe.
Amin'ny ankapobeny, ny zezika mitambatra dia misy otrikaina roa na telo farafaharatsiny (azota, phosforus, potasioma). Izy io dia manana ny mampiavaka ny atiny mahavelona be ary vitsy ny voka-dratsiny. Ny zezika mitambatra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny zezika voalanjalanja. Tsy afaka manatsara ny fahombiazan'ny zezika fotsiny izy io, fa mampiroborobo ihany koa ny vokatra azo sy avo lenta.
1.Ny tsipika famokarana zezika 1.Composite dia manana ny mampiavaka ny fanjifana angovo ambany, ny fahafahan'ny famokarana lehibe ary ny tombontsoa ara-toekarena tsara.
2. Ny tsipika famokarana dia mandray granulasi maina, manala ny fizotran'ny fanamainana fanamainana ary mampihena be ny vidin'ny fitaovana.
3. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia matevina sy mitombina, manarona faritra kely iray.
4. Amin'ny fizotry ny famokarana, kely ny fanjifana angovo ary tsy misy fako telo. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia manana fahombiazana azo antoka, kalitao azo antoka ary androm-piainana maharitra.
5. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia azo ampiasaina hamokarana akora zezika zezika marobe. Ary ny tahan'ny granulation dia avo ampy.
6. Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia afaka mamokatra zezika mitambatra amin'ny fifangaroana samihafa hamaly ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Amin'ny ankapobeny, ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia mazàna misy ireto manaraka ireto: ny fomba fampifangaroana, ny fizotran'ny granulation, ny fizotran-drongony, ny fizahana, ny fizahana ary ny fizotran'ny fonosana.
1. Masinina mitambatra Dynamic:
Ireo akora misy akora mihoatra ny telo dia azo tanterahina. Ny milina fametahana dia manana Silo mihoatra ny telo, ary afaka mampitombo sy mampihena ny silo araka ny takian'ny mpanjifa. Amin'ny fivoahan'ny tsirairay silo dia misy varavarana elektronika pnemika. Eo ambanin'ny silo dia antsoina hoe hopper izy, izay midika fa ny fanambanan'ny hopper dia mpampita fehikibo. Voalaza fa ny hopper sy ny conveyor fehikibo dia ahantona amin'ny faran'ny fampitaovana, ny faran'ny iray hafa dia ampifandraisina amin'ny sensor sensor, ary ny sensor sy ny faritra fanaraha-maso pneumatika dia mifandray amin'ny solosaina. Ity milina ity dia mandray ny lanjan'ny refy elektrika, izay fehezin'ny mpanara-maso azy, ary ny refin'ny lanjan'ny fitaovana tsirairay dia vita mifandimby. Izy io dia manana tombony amin'ny rafitra tsotra, ny fahamendrehana avo lenta, ny fandidiana tsotra ary ny fampiasana azo antoka.
2. Crusher rojo mitsangana:
Atambaro ireo fitaovana mitambatra samihafa amin'ny ampahany iray ary ampidiro ao anaty crusher rojo mitsangana. Ny poti-javatra dia hofongarina ho potika kely hihaona amin'ny filan'ny fizotran'ny granulation aorian'izay.
3. feeder kapila mitsangana:
Aorian'ny fanorotoroana ny akora dia alefa any amin'ny mpamatsy kapila mitsangana, ary ny akora dia afangaro sy afangaro amin'ny fifangaroana. Ny firakofana anatiny amin'ilay mixer dia polypropylene na lovia vy tsy misy fangarony. Ny fitaovana manta toy izany miaraka amin'ny harafesina sy viscosity avo lenta dia tsy mora raikitra. Ny fitaovana mifangaro dia hiditra amin'ny granulator amponga.
Ny fanekena ny teknolojia extrusion maina, dia esorina ny fizotran'ny fanamainana. Miankina amin'ny tsindry ivelany izany, ka voatery terena hofongarina ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fanadiovana roa mihodina. Ny hakitroky ny tena fitaovana dia afaka mitombo in-1.5-3, ka mahatratra ny fenitry ny tanjaka. Mety indrindra amin'ny toerana hampiakarana ny lanjan'ny vokatra. Ny elastika fandidiana sy ny adaptation isan-karazany dia azo ahitsy amin'ny tsindry rano. Ny fitaovana dia tsy vitan'ny siantifika sy mandanjalanja amin'ny firafitra ihany, fa tsy dia mampiasa vola firy, misy fiantraikany haingana ary tombony ara-toekarena tsara.
5. Screene Rotary Drum:
Ampiasaina indrindra hampisarahana ny vokatra vita amin'ny akora namboarina. Aorian'ny sieving, ny poti-kazo mahay dia ampidirina ao anaty masinina fonosana, ary ireo poti-javatra tsy mendrika dia ampidirina ao anaty crusher rojo mitsangana mba hanaovana granulated indray, ka mahatsapa ny fanasokajiana ny vokatra sy ny fanasokajiana mitovy ny vokatra vita. Ny masinina dia mandray efijery mitambatra mba hikarakarana mora sy soloina. Tsotra sy voadona ny firafiny. Ny fandidiana mora sy milamina dia fitaovana tena ilaina amin'ny famokarana zezika.
6. Masinina fonosana elektronika:
Aorian'ny fisavana ny sombintsombiny dia fonosin'ilay milina famonosana izy ireo. Ny milina fonosana dia manana automatique avo lenta, mampiditra lanjany, zaitra, fonosana ary fitaterana, izay mahatsapa fonosana be dia be ary mahatonga ny fizotran'ny fonosana hahomby sy marina kokoa.
7. conveyor fehikibo:
Ny conveyor dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotry ny famokarana satria mampifandray ireo faritra samihafa amin'ny tsipika famokarana iray manontolo. Amin'ity tsipika famokarana zezika mitambatra ity dia misafidy ny hanome anao mpampita fehikibo izahay. Raha ampitahaina amin'ny karazana conveyor hafa, ny conveyors fehikibo dia manana fandrakofana lehibe, mahatonga ny fizotry ny famokarana hahomby sy ekonomika kokoa.